Dib u eegida kaararka deynta fiisada 2022 | Sidee U Shaqeeyaa - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Dib u eegida kaararka deynta fiisada 2022 | Sidee U Shaqeeya
Dib u eegida kaararka deynta fiisada 2022 | Sidee U Shaqeeya
Dib u eegista kaararka deynta Visa ee aad ku dhowdahay inaad akhrido waa dib-u-eegis aan leexleexad lahayn, tan kaliya maahan laakiin guud ahaan ra'yigayada ku aaddan alaab kasta maahan qaab xayaysiis ah, caadi ahaan waa fikradahayada kaas oo laga soo qaatay gudaha- cilmi-baaris qoto dheer oo aan saameyn ku yeelan shirkadda alaabta sinaba. Waxaan bixinaa fikraddayada daacadda ah ee kaararka deynta Visa ee sanadkan loogu talagalay akhristayaashayada waxaanan eegnay kaararka bixiya abaalmarinta ugu qiimaha badan oo leh khidmadaha sanadlaha ah ee hooseeya.
Aynu si toos ah u dhex galno maqaalka halkaas oo aan ka bilaabi doono waxa uu yahay kaarka deynta Visa iyo sida uu u shaqeeyo. Ka dib, waxaan dib u eegi doonaa kaararka deynta Visa ugu fiican iyo faa'iidooyinka la socda iyaga; Safarka qaaliga ah wuxuu abaalmariyaa kaadhadhka, kaadhadhka diyaaradaha iyo kaadhadhka huteelka si loo helo badeecada ugu fiican ee isticmaal kasta. Halka kaadhadhka qaarna aanay lahayn lacag sanadle ah, qaar badan oo ka mid ah kaadhadhka abaal-marinaha safarka ayaa leh kharashyo la taaban karo oo lagu caddeeyo abaal-marinnada iyo faa'iidooyinka la bixiyo.
Waxaa jira boqolaal haddii aysan ahayn kumanyaal kaararka deynta Visa oo kala duwan, mid kastaa wuxuu leeyahay xaddid credit, kharashyo, iyo soo jeedin gaar ah. Markaad codsato kaarka deynta Visa, inta badan faahfaahinta muhiimka ah waxaa dhab ahaantii go'aamiya bangiga taageerada kaarka. Waa kuwan waxa ay tahay inaad ka ogaato kaararka deynta ee sida calaamadda Visa.
Aqoonsiga caalamiga ah - Haddii aad safar badan ku jirto, waxay u badan tahay inaad doorbidayso inaad isticmaasho kaarka deynta Visa ama Mastercard. American Express guud ahaan aad ayay u yartahay soo dhawaynta dibada, halka Discover guud ahaan loo tixgaliyo sida ugu horayn shabkada kaararka US-kaliya. Yaa aan rabin kaarka ay ku isticmaali karaan meel kasta oo adduunka ka mid ah?
Soosaarayaal badan - Visa bixiye shabakad lacag bixin ah waxa kaliya oo la barbar dhigi karaa Mastercard, waxay ku leeyihiin qiyaas aqbal isku mid ah gudaha Maraykanka. Daahfurka waxaa lagu aqbalaa meelo yar
U-qalmitaanka Costco - Kaararka fiisaha ayaa runtii ah kaadhadhka kaliya ee (dhammaan noocyada) ee wali laga aqbalo dukaamada Costco. Sababtan awgeed, haddii aad wax badan ka iibsatid Costco, waxay macno samaynaysaa inaad kala horraysato kaararka Visa kaararka shabakadaha kale.
Xadka kaararka deynta Visa
Kaadhadhka deynta fiisaha waxay ku xiran yihiin codsade kaararka credit dhibcaha, dakhliga sanadlaha ah, iyo sidoo kale arrimo kale waxaa ka mid ah sida daymaha taagan iyo heerka shaqo codsadayaasha. Guud ahaan, xadka deynta ee kaararka deynta Visa waxay u dhexeysaa $500 ilaa inta ugu badan $50,000+.
Kaarka haystayaasha u qalma xadka deynta oo ka yar $5,000 waxay heli doonaan Visa dhaqameed. Kaararka Infinite-ka ee Visa waxaa lagu soo waramayaa in kaliya loo qaybiyo kuwa haysta kaarka kuwaas oo leh xadka deynta sare ee $10,000 ama ka badan. Intaa waxaa dheer, sababtoo ah inta badan faa'iidooyinka waxaa bixiya soo saaraha oo maaha shabakada, farqiga u dhexeeya Visa, Saxiixa Visa, ama kaarka Visa Infinite ee dhifka ah ayaa ah mid aan la xalin, marar badan.
Waa maxay Kaarka Visa?
Sida laga soo xigtay Investopedia, "Kaarka Visa waa kaarka lacag-bixinta ee isticmaala shabakadda Visa oo ay calaamad u tahay Visa". Waxaa jira dhowr siyaabood oo kale oo aad ku qeexi karto kaarka fiisaha laakiin Investopedia ayaa ka fudud oo ka saxsan. Kaararka fiisaha waxaa loo kala saari karaa kaarka deynta Visa, kaarka debit-ka Visa, iyo kaadhadhka hadiyadaha ee Visa prepaid iyo hadiyad.
Shirkadda waxaa laga heli karaa ilaa 1958; maanta waxa ay ku faantaa in ka badan 3.3 bilyan oo kaarar oo qayb ka ah shabakadeeda lacag bixinta ee caalamiga ah. Waxay ku bilaabatay kaarka deynta oo kaliya, ka dibna la ballaariyay inkastoo maqaalkan aan diiradda saarayno dib u eegista kaararka deynta.
Iyadoo aan loo eegin xaqiiqda ah in Visa aysan si toos ah u bixin kaararka deynta, ku dhawaad ​​dhammaan bangiyada waaweyn iyo kaararka ururada deynta ee Maraykanka iyo dhammaan qaybaha kale ee adduunka waxay bixiyaan alaab ka mid ah shabakadda lacag bixinta Visa.
Kuwaas waxaa ka mid ah kaarar bixiya abaal-marinno ah qaab dhibco iyo lacag caddaan ah, iyo sidoo kale kaarar badan oo aan abaal-marin ahayn oo bixiya fududaan iyo siyaabo aad ku dhisto credit-kaaga. Kaarka deynta Visa ee ugu habboon waxay ku xiran tahay buundada deynta macaamilka, dakhliga, iyo caadooyinka kharashgareynta.
5-ta Kaadhadh ee credit Visa ee ugu sareysa ee 2022
Visa waxay bixisaa qaar ka mid ah kaararka deynta ee ugu fiican halkaas oo maqaalkan, waxaad ku ogaan doontaa waxa qaar ka mid ah kaararka deynta Visa ugu fiican ay bixiyaan isticmaalkooda. Haddi aad raadinayso kaar dib u soo celinaya lacag caddaan ah, dulsaar yar ama fursad aad ku dhisto credit, waxaanu kaa caawin doonaa inaad hesho kaarka deynta Visa ee kugu habboon.
Chase Xorriyadda Aan Xaddidnayn
Kaarka deynta Visa-ga ugu fiican ee abaal-marinaha dib-u-celinta waa kaarka Visa Freedom Unlimited ee Chase. Waxay ku siinaysaa bilawga dib u soo celinta lacag caddaan ah oo leh gunno saxiix ah oo la heli karo, waxaad heli kartaa $200 oo gunno ah ka dib markaad $500 ku iibsatid 3da bilood ee ugu horreeya akoonkaaga ayaa furan.
Sidoo kale, waxaad ku kasban doontaa 5% lacag caddaan ah iibsiyada maalinlaha ah, oo ay ku jirto iibsiyada safarka ee lagu sameeyo bogga Chase Ultimate Rewards, oo lagu daray 5% dib u iibsashada dukaamada raashinka ilaa $12,000 oo la kharash gareeyay sanadkaaga ugu horeeya marka laga reebo iibsiyada lagu sameeyay Target iyo Walmart.
Heerka Bankiga Mareykanka ee "Go Visa Saxiixa" Kaarka
Markaad raadinayso lacag sanadle ah oo aan ugu wanaagsanayn kaarka deynta Saxiixa Bankiga ee US Bank Go Visa waa talada ugu fiican. Marka laga reebo kaarka deynta Visa ee ugu fiican oo aan lahayn lacag sanadle ah, Kaarka Saxiixa ee Bankiga Mareykanka ee Altitude Go wuxuu kaloo bixiyaa abaalmarinno badan. Haddii aad dooratid inaad isticmaasho kaarkan, waxaad heli kartaa 20,000 dhibcood oo gunno ah (qiimihiisu yahay $200) ka dib markaad $1,000 ku iibsatid 90-ka maalmood ee ugu horreeya xisaabtaadu way furan tahay.
Waxa intaa dheer in Waxaad sidoo kale heli doontaa dhibco kharash gareynta maalin kasta, oo ay ku jiraan 4 dhibcood $ 1 kasta oo aad ku bixiso cuntada, 2 dhibcood halkii $ 1 raashinka, 2 dhibcood halkii $ 1 ee gaaska, 2 dhibcood halkii $ 1 ee adeegyada qulqulka, iyo 1 dhibcood. halkii $1 ee dhammaan iibsiyada kale.
Kaarka Amaahda ee Abaalmarinta Hantida Capital One
Kaarka deynta ee Abaalmarinta Capital One Venture waxay sahlaysaa in lagu kasbado abaal-marinaha safarka. Ma jiraan qaybo gunno ah oo la heli karo oo ay tahay inaad la socoto. Doollar kasta oo aad kharash garayso waxa aad kasbanaysaa laba mayl. Sidoo kale, waxaad heli doontaa fursad aad ku kasbato gunnada is-diiwaangelinta. Waxaa dheer 60,000 oo mayl gunno ah ka dib markaad $3,000 ku iibsatay wax iibsiga 3-da bilood ee ugu horreeya xisaabtaadu way furan tahay. Intaa waxaa dheer, ka digtoonow inaad isku dheelitirto qiimaha aad ka heli karto kaarkan $95 khidmaddiisa sanadlaha ah.
Chase safayr Reserve
Markaad raadineyso kaarka deynta Visa ee kugu xumeynaya abaal-marinno badan Kaydka Chase Sapphire waa adiga. Waxaad helaysaa 60,000 dhibcood oo gunno ah ka dib markaad $4,000 ku iibsatid wax iibsiga 3-da bilood ee ugu horreeya xisaabtaadu way furan tahay. Kaarka abaalmarinta qaaliga ah, Chase Sapphire Reserve waxay bixisaa wax ka badan dhibco kaliya, waxay sidoo kale bixisaa $ 300 credit credit, taas oo kaa caawin karta in la dhimo kharashka $ 550 ee kaarka. Sidoo kale, credit ilaa $100 kharashka codsiga markaad codsanayso Global Gelida
Shakhsiyaadka leh dhibcaha buundooyinka credit-ka ee Petal 2 Visa CreditCard waxay ka dhigtaa dhismaha credit madadaalo madadaalo. Ku bixinta wakhtiga waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad samayn karto si aad u dhisto credit. Soo saaraha ayaa sidoo kale ka warbixiya dhaqdhaqaaqaaga koontada saddexda xaruumood ee deynta, taas oo muhiim u ah markaad ku shaqeyneyso deyntaada. Ma jirto lacag sanadle ah ama deebaaji ammaan ah.
Kaarka fiisaha ma yahay doorasho sax ah?
Si daacad ah, shabakada lacag-bixinta inta badan wax dhib ah ma laha kiisaska oo dhan, marka laga reebo xaqiiqda ah in haddii aad leedahay kaarka Visa-ga ay waxtar leedahay haddii aad wax ka iibsatid Costco, u safarto dibadda, oo aad rabto in aad dammaanad qaaddo in ganacsi kasta oo aqbala kaararka deynta. aqbal kaarka deynta gaar ahaan lacagaha dhijitaalka ah.
Sidee loo codsadaa kaarka deynta Visa?
Waxaad si toos ah uga codsan kartaa kaarka Visa kasta shirkad kasta oo kaadhka bixisa ama bangiyada, codsigaaga xitaa waxa laga yaabaa in la marsado website shirkadda. Waxaad la xiriiri kartaa bangiga shaqsi ahaan laanta bangiga.
Waxaad ka heli kartaa macluumaadka kaadhka deynta Visa dhowr goobood oo la aamini karo oo ay ku jiraan Forbes Advisor. Waxaa habboon in, ay faa'iido leedahay in aad hubiso warbixintaada deynta oo aad tixgeliso waxa baahida deyntaadu tahay.
Waa maxay faraqa u dhexeeya Mastercard iyo kaarka deynta Visa?
Haddii aad is aragtay in aad is waydiinayso kee u wanaagsan Visa iyo Mastercard markaas, farqiga u dhexeeya Mastercard iyo Visa waxa la odhan karaa waa mid dayacan.
Labaduba waa laga aqbalay iibiyayaal isku mid ah waxayna labadooduba bixiyaan abaal-marin adeegsiyeed.
Waxaa jira farqi dahsoon ee faa'iidooyinka uu bixiyo soo saaraha kasta oo aan daruuri ahayn shabakadaha, laakiin si dhab ah uma ogaan doontid farqi u dhexeeya labada.
Waa maxay sababta kaadhka fiisaha uu muhiim u yahay?
Kaararka dal-ku-galka waxa aqbala baayacmushtarka iyo meheradaha ku sugan in ka badan 200 oo waddan oo adduunka ah sida aan ku tilmaamnay bilawga maqaalka.
Kaadhka deynta iyo xadka amaahda waxaa la dejiyey iyadoo lagu salaynayo xogta maaliyadeed ee macaamilka iyo buundada deynta taasoo aad muhiim u ah sababtoo ah taasi waxay ka joojin kartaa mid inuu burburiyo taariikhdiisa deynta.
Sidoo kale, kaararka Visa sida Mastercard uu ka kooban yahay nambar 16-god ah oo gaar ah oo ku daabacan kaarka iyo microchip-ka keydiya macluumaadka qofka kaarka heysta.
Kaadhadhka amaahda ee Visa ayaa wali ah mid ka mid ah labada shabakad ee kaararka deynta ee ugu sarreeya oo ay weheliso Mastercard. Waxaa jira boqollaal kaararka deynta Visa oo aad ka dooran karto, faa'iidooyinka mid kasta oo ka mid ah kaararkan deynta ah ay bixiyaan waxay ku xiran tahay shirkadda kaararka deynta iyo waxaad raadineyso.
Maqaalkan waxaan ku soo qaadanay doorashooyinkeena ugu fiican iyadoo lagu saleynayo qaybo kala duwan. Waxaan u soo qaadanay Kaarka deynta Abaalmarinta Capital One Venture sida ugu wanaagsan marka ay timaado helitaanka abaal-marinnada safarka, Kaarka Credit Card Visa ee Petal 2 oo ah kaarka Visa ugu fiican ee shakhsiyaadka leh dhibcaha credit credit ee raadinaya inay dib u dhisaan dhibcahooda credit.
15 Kaararka Amaahda Ugu Fiican Ardayda Kulliyadda
20 Kaararka Deynta Ugu Fiican ee Dadka Waaweyn
17 Kaararka Amaahda ee Ugu Fiican ee Lacag -bixinta Xaqsoorka ah
15 Kaararka Daynta Birta ugu Fiican
Dib u eegida Caymiska Mercury 2021: Ma sharci baa mise waa khiyaamo?
Runtii waa wax laga xumaado in lagu jiido gaar ahaan marka aad ku raaxaysanayso fuulid weyn. Waxaad u baahan doontaa inaad…
Maareynta Hantida ee Wells Fargo | 2022
Waxaan rabnaa in maqaalkani noqdo mid kooban oo sax ah. Sidaa darteed, waxaan si toos ah u guda gali doonaa dooda ku saabsan…
Faallooyinka Robinhood vs Acorns 2022: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Maalgashadayaashu waa hanti-abuurayaasha dhabta ah. Waxay si buuxda u fahmeen nuxurka aqoonsiga fursadaha lacag lagu sameeyo. Our…